hardware အကြောင်း သိကောင်းစရာ ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Harddisk Repair and Maintain , Internet Tools » hardware အကြောင်း သိကောင်းစရာ
By သန့်ဇင်ဌေ6း:39 PM18 comments
ကျွန်တော် စာမရေးဖြစ်တာ အတော်ကြာပြီ။အခုလည်း ညီလေး နေမကောင်းနေတဲ့ အချိန်လေးတွေမှာ ဆိုဒ်မှာ စာလာဖတ်သူတွေ အတွက် အကျိုးရှိအောင် ပိုစ့်လေး တစ်ပိုစ့် တက်နိုင်သလောက်လေးပေါ့ တင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ခဏ စာဝင်ရေးတာပါ။ ကျွန်တော် အရင်နှစ်တွေကတော့ စာကို ဇောက်ချ ရေးနိုင်ပေမယ် ဒီနှစ်တော့ စာမရေးဖြစ်တော့တာပါ။ စာတန်း တစ်ဖတ် ကွန်ပျုတာပိုင်း တစ်ဖတ် စာရေးဖို့ တစ်ဖတ်နဲ့ ဆို အတော်လေး ဗျာများလို့ စာရေးတဲ့ အပိုင်းကို လက်လွှတ်လိုက်တော့တာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ စာမရေးတာလည်း ကြာပြီ ဆိုတော့ မှားတာတွေ ရှိလာခဲရင်လည်း နားလည်ပေးနိုင်ပါစေလို့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ။ ကဲ့ ဒီတော့ အစလည်း ပျိုးပြီးပြီ နိဒါန်းစပြီးရင်တော့ စာကိုယ်တော့ လာရတော့မယ် မဟုတ်လား။ ကျွန်တော်တို့ Hardware အကြောင်းကို စာအများကြီး ဖတ်စရာမလိုပဲ့ အတော် အသင့် တော်တော်လေး နားလည်သွားနိုင်အောင် ဒီပိုစ့်လေးကို တင်ပေးလိုက်တာပါ။
စာအုပ်တွေကိုပဲ့ ပြန်မျှတဲ့ သဘောပါပဲ့။ ဒါပေ့မယ် အကုန်လုံး တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ခဏလေး ဖတ်ယုံနဲ့ Hardware ဘယ်အပိုင်းက ဘာဆိုတာကို နားလည်မှာ ဖြစ်သလို ကိုယ်ကိုင်တွယ်တဲ့ စက်ရဲ့ သဘောတရား ပျက်တာ ပြင်တာကို ကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းနိုင်လာအောင် လမ်းပြပေးတဲ့ စာအုပ်တွေလို့ ပြောရင် ပိုမှန်မယ် ထင်ပါတယ်။
laptop များနှင့် ကခုန်ခြင်း။
BUS များ အကြောင်း
ကွန်ပျုတာ Connector များအကြောင်း
Core i3 ,Core i5 and Core i7 ကွာခြားချက်များ
Basic Dynamic and Dynamic များအကြောင်း
Optical Drive အကြောင်း
Sound Card အကြောင်း
Video Card အကြောင်း
Hardware အခြေခံနိုင် ပြသနာအဖြေစမ်းစစ်မူ
Safe Mode အသုံးပြုပုံ Direct X အကြောင်း BIOS Feature နဲ့ Device Manager အကြောင်း
ကွန်ပျုတာ ပျက်လျှင် သိနိုင်သည့် အချက်များ
ကွန်ပျုတာ ပြုပြင်ရာတွင် စဉ်းစားရမည့် အချက်များ
DVD -R +R -RW +RW အကြောင်း
ဒီစာတွေကို သေချာ ဖတ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင် Hardware ပိုင်းကို နားလည်နိုင်လာမှာ ဖြစ်သလို သူများအကူညီ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ကိုယ်တိုင် ယုံကြည့်မူ ပြည့်လာတဲ့ အမျှ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်လာမယ်။ ကိုယ်တိုင်တက်သိနားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကတော့ စာဖတ်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပေါ့။ ဒီတော့ စာဖတ်ကြပါဗျာ. မြန်မာတွေ စာတက်ဖို့ စာဖတ်ဖို့ လိုနေပြီ။
နိဂုဏ်း အနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော် အရင်က စာတွေတော်တော်လေး ရေးဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာပိုစ့်တွေ များပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့လည်း စာအုပ်တွေလောက်ပဲ့ ပြန်မျှပေးနိုင်တော့တဲ့ အတွက် တကယ်ပါ စိတ်ထဲ့မှာတော့ ဘယ်လိုကြီးလည်း မသိဘူး။ ဘာပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် စာဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းရင်း နိဂုဏ်းချုပ်ပါရစေဗျာ။
aung March 28, 2012 at 9:38 PM
ကျေှးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် အကို..
အဆင်ပြေရင် blogger လုပ်နည်းလေး ရေးပေးစေချင်ပါတယ် အကို
pandablogger March 28, 2012 at 10:24 PM
download သွားပြီးအကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချမှာပါ
I bless you all everything successful brother.
အကိုအခုပို့စ်မှာ တင်ထားတာတွေ အကုန်ကိုဖတ်မယ်
DVD -R +R -RW +RW အကြောင်း ဆိုတာကဖွင့်လို့မရပါ
သန့်ဇင်ဌေး March 29, 2012 at 6:57 AM
DVD -R+R လင့်ကို ကျွန်တော် ပြန်ပြင်ပေးထားပါတယ်
Anonymous March 29, 2012 at 9:43 AM
lional March 29, 2012 at 12:29 PM
Print လုပ်တာလဲမရဘူး Loading ပဲဖော်နေတော့တယ် ....
download as ကနေ wordကိုနှိပ်ကြည့်ပါလားwordနဲ့တော့ရတယ်ဆွဲကြည့်တာ
နေလင်းဖြိုး(နည်းပညာ) April 3, 2012 at 9:57 PM
Zaw April 6, 2012 at 11:50 PM
Anonymous April 21, 2012 at 4:03 PM
ကျေးဇူးပါအကိုရေ ယူသွားပြီ လေ့လာတော့မည်
အကိုလည်း နှစ်သစ်မှာစိတ်သစ်ကိုယ်သစ်နဲ့ ဘ၀ကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေနော်